China Photochromic pigmenti UV ink agba mgbanwe ntụ ntụ site na ìhè anyanwụ rụpụta na Factory | Topwell
Foto pigchromic bụ ụdị microcapsules. Na ntụ ntụ mbụ etinyere na microcapsules.Powder ihe nwere ike ịgbanwe agba na ìhè anyanwụ. Kinddị ihe a nwere njirimara nke agba dị nhịahụ na ike ihu igwe ogologo oge. Enwere ike ịgbakwunye ya na ngwaahịa kwesịrị ekwesị. Anyị na-amịpụta ntụ ntụ ntụ bụ ihe dị ka 3-5 um, nrụpụta ihe dị irè dị elu karịa ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya na ahịa. Okpomọkụ na-eguzogide okpomọkụ ruo ogo 230.
♥ Bright agba, agba mmetụta ọsọ ọsọ
Resistance Nguzogide okpomọkụ dị elu, nkwụsị mgbaze
♥ Super ogologo ihu igwe na-eguzogide
♥ ime mgbanwe siri ike, dị mfe ịgbasasị
♥ Na-agbaso ihe nyocha GB18408
1. Ink. Adabara niile ụdị ebi akwụkwọ ihe, gụnyere akwa, akwụkwọ, sịntetik film, Glass ...
2. Mkpuchi. Adabara nile di iche iche nke elu mkpuchi ngwaahịa
3. Ogwu ogbugba. Na ọdabara nile di iche iche nke plastic pp, ịkwanyere, ABS, silicone roba, dị otú ahụ
dị ka ọgwụ nke ihe, na-akpụzi extrusion
Photochromic ink enwere ike iji ya na agba, ink, ụlọ ọrụ plastik. Ihe ka ọtụtụ n'ime ngwaahịa a bụ ime ụlọ (enweghị gburugburu anwụ) na-enweghị agba ma ọ bụ agba ọkụ na n'èzí (gburugburu ebe obibi anyanwụ) nwere agba na-egbuke egbuke.
Ihe osise Photochromic na-enwe mmetụta nke mmetụta nke ihe mgbaze, PH, na ịkwa osisi karịa ọtụtụ ụdị agba ndị ọzọ. Ekwesiri ighota na enwere uzo di iche iche na agba di iche iche ka onye obula gha enyocha ya nke oma tupu ngwa ahia.
Photochromic pigments nwere ezigbo nkwụsi ike mgbe echekwara ya pụọ ​​na ọkụ na ọkụ. Echekwa n'okpuru 25 Deg.C. Ekwela ka ọ kpoo, n'ihi na nke a ga-emebi capsules fotochromic. Longterm ikpughe na UV ìhè ga-iweda fotochromic capsules ike ịgbanwe agba. A na-ekwe nkwa ịdị ndụ nke ọnwa iri na abụọ ma ọ bụrụ na echekwara ihe ahụ na gburugburu ebe dị jụụ na nke gbara ọchịchịrị. Akwadoghị nchekwa karịa ọnwa 12.
Osote: Okwu Thermochromic maka thermochromic paint Thermochromic Ink Thermochromic Ink